सेक्स स्क्याण्डलको रहस्य खुलेपछि केही राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिकताका आधारमा पद पनि त्यागे । आउनुहोस् हेरौ अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका सेक्स स्क्यानडलहरु
१. राष्ट्रपति जेम्स भुजानन
अमेरिकी राष्ट्रपतिको इतिहासमा एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति हुन् जेम्स भुजानन । १९ औ शताब्दीमा उनी होमोसेक्सुएल भएको हल्ला व्यापक चलेको थियो । उनी सिनेटर रुफससँग १५ वर्षसम्म सँगै बसेका थिए भने त्यसपछि सिनेटर अलाबासँग बसेका थिए । भुजानन राष्ट्रपति छँदा आरोन भि ब्राउन जसले अमेरिकी पोष्टमास्टर जनरल भएर काम गरेका थिए । उनले त्यसबखत बिलियम रुफस किङ भुजाननको श्रीमति भएको बताएका थिए ।
२. जर्ज डब्लु बुस
डियुआइ र कोकिन प्रयोग गरेको आरोप लागेका जर्ज डब्लु बुस पनि सेक्स स्क्याण्डलका कारण चर्चामा आएका थिए । अमेरिकाका ४३ औ राष्ट्रपतिलाई केही सेक्सुअल आरोपहरु लागे । मार्गी डेनिसले उनलाई अपराधिक काम गरेको भन्दै मुद्धा नै दर्ता गरिन् भने बलात्कारको अरोप लगाइन् । पछि उनले आत्महत्या गरिन् । अर्को आरोप ट्यामी फिलिप्सले लगाइन् । १८ महिनासम्म अफयेर चलेको र बुसले यसबीच शारीरिक शोषण गरेको आरोप उनले लगाएकी थिइन् । बुस र उनको सम्बन्ध १९९९ मा अन्त्य भएको थियो ।
३.वारेन जि. हार्डिङ
हार्डिङको १५ वर्षसम्म आफ्नै साथीकी श्रीमती केरी फुल्टन फिलिप्ससँग अफयेर चल्यो । राष्ट्रपति भइरहँदा उनले आफुभन्दा ३० वर्ष कान्छी नान ब्रिटन गरेकी युवतीसँग अफयेर चलाए । २० वर्षकी नानले भावी राष्ट्रपतिकासँग आफ्नो भर्जिनिटी तोडिन् ।
ब्रिटनले एक नाजायज बच्चलाई जन्म दिएको र त्यो बच्चा, एलिजाबेथ एन हार्डिङको भएको बताइएको थियो । सन् १९२३ मा जब हार्डिङको अप्रत्यासित मृत्यु भयो, त्यसबखत हार्डिङको श्रीमतीले बिष खुवाएर मारेको हल्ला व्यापक चलेको थियो । ब्रिटनले प्रकाशित गरेको किताबमा राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्धबारे खुलाएकी थिइन् ।
४. थोमस जेफरसन
जेफरसनको सम्बन्ध स्याली हेमिङसँग रहेको थियो । पछि आफ्नै श्रीमतीको बहिनीसँग पनि सम्बन्ध रहेको व्यापक चर्चा चल्यो जसका ६ वटा बच्चाहरु थिए । यसबारे व्यापक विवाद पनि रह्यो । कतिले यस्ता सम्बन्धका लागि उनीसँग समय नरहेको समेत बताए ।
५. डिवइट डि इसेनहावर
इसेनहावरको आफ्नै ड्राइभरसँग अफयेर रहेको थियो । यो कुराको खुलासा एक पुस्तकमा मर्ली मिलरले गरिएकी थिइन् । सन् १९४५ मा इशेनहावरले जनरल जर्ज मार्सलसँग आफ्नी श्रीमतीसँग डिभोर्सका लागि अनुमति मागेका थिए । उनले समरस्बीसँग विवाह गर्न खोजेका थिए । इशेनहावरका बायोग्राफरका अनुसार इशेनहावर र केबीच सम्बन्धबारे बोल्न चाहेनन् तर उनीहरुबीच लव अफयेर रहेको थियो जसमा कुनै प्रश्न छैन ।